Ny Maripejy Tsy Mahazatra, Mifono Misitery Indraindray Hita Ao Anatin’ireo Boky Tranainy Ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2017 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, русский, हिन्दी, Español, عربي, 繁體中文, नेपाली, Italiano, English
Raha toy ianao ka efa sendra izany dia tsy irery ianao. Ny maripejin'ny boky tsy mahazatra izay navela tao anatin'ny boky efa nampiasaina dia toa zava-mitranga manerantany, ary ny bilaogin-dahatsoratra nosoratan'ny olona iray amin'ny solon'anarana hoe Naver Matomer tao amin'ny katalaogy “Ny Talenta Miavaka Ao Anatin'ny 28 Segondra” (28秒に一人の逸材さん) no ahitana ny endriky ny maripejy sasany ao Japana.
Maro tamin'ireo maripejy, talohan'ny nizarana ny sary tao amin'ny Twitter , no hita tamin'ny lohateny novidina tao amin'ny Book Off , andiana mpivaro-boky efa niasa manerana ny firenena ao Japana.
Efa nahavita namaky ny boky Otsuichi “Summer, Fireworks, and My Dead Body” (Lohataona, Afomanga, sy ny Fatiko) aho, boky iray hitako ihany tao amin'ny Boky Off, raha nandeha fiarandalamby hody aho. Nampiseho sary tena natao kitoatoa ny mpanoratra, ary nampidanaka ahy ny zavatra mampihorokoditra hitako tany amin'ny farany, fa ny zavatra tena faran'izay nampatahotra indrindra dia ny sarin'ilay olona hafahafa teo anelanelan'ny pejy farany.
Kay lety e, misy zavatra ato anatin'ity boky dikan'i Dogra Magra izay novidiako tao amin'ny Boky Off ity. Misy maripejy Hello Kitty (Sanrio) ato anatiny. Ary misy tarehin-tsoratra saro-bakiana miaraka amin'ny torolalàna famakian-teny nosoratana eo akaikiny. Nisy olona iray namaky ny (tantara nofinofin'ny mpitsongodia ) Yumeno Kyusaku , tsy afeniko ny fientanentanako! Tena tsara ny boky tonta!
Hita ao amin'ny bilaogin-dahatsoratra Naver Matome ireo maripejy hafahafa maro kokoa.